IFTIINKACUSUB.COM: Hooyo waa Hoy iyo Guri loo hoydo.
Hooyo waa nolosha Hoygeena,magaca Hooyo asal kiisu waxa uu ka yimi Hooyga ama Guriga,qof aan Hoy haysan Dunida sida uu ugu nooladaa waa ay adag tahay,waana mida sababtay in Hooyo loo bixiyo magaca Hoyga ama Guriga.
Hooyo waa Guruga nolosha oo dhan,Hooyo qofkastaa waxa uu caloosheeda kusoo jiray muddo aad u badan oo Bilo ah,Caloosha Hooyadu waa Hoyga u horeeya ee aynu ku soo noolayn.
Hoyga caloosha ee Hooyada marka aynu kasoo baxno hadana waa aynu nolol raaxo leh ka helkaa waa oogadeeda iyo korkeeda,waxa aynu noqonaa kuwo sida ay doonaan ugu noolaada korka Hooyada iyo dusheeda.
Waxkasta oo inagu soo dhaca waxa aynu ku samaynaa Hooyada korkeeda,waa aynu ku saxaroonaa,Kaadiba,mantagnaa,waxa kaloo aynu ku samaynaa habeen iyo maalin korkeeda iyo oogadeeda ayaynu ka dulqaylinaynaa.
Hooyadu waa qof aad u cajiib badan waa nolol la'aanteed aan aduunka aanu jireen.Hooyadu waxa ay xamishaa oo ay aqbashaa wax aanu aabuhu yeeli karin isla markaana aanu aqbali karin.
Hooyadu waa mid habeen iyo malin usoo jeeda sidii aad u noolaan lahayd,markaliya ma ogolaanayso hooyadu in aad la kulanto nolol cidhiidhi ah,xataa ma yeelayso jidhkeeduna aqbali maayo in aad ooydo,markasta oo ay oohin afkaaga kasoo baxdo waxa ay jeceshahay hooyadu in ay ku aamusiiso.
Hadii aad maalin xanuusato hooyadu iyada ayaa ka xanuun badan,kaa soo jeed badan,adiga hadii aad tahay Ilma yar ama qof wayn,waxaa laga yabaa in marka aad doonto aad iska seexato ama aad iska qososho,balse Hooyadu waxa ay u shaqaynaysaa si aynaan garan karayn.
Hooyadu dhamaan dareenkaaga oo dhan ayay la shaqaynaysaa, Hooyadu waa Hooyo waa hoy iyo guri laga galo dhaxamaha.Haddii adiga oo korkeeda saaran ay dhibaato idin soo gaadho ,waxa ay ku dadaalaysaa in ay adiga horta kaa nabad galiso.
Hooyo waa gacmahii nolosha waana ababshahii Dunida,waan jeclaan lahaa in aan qoraalkan intaasi kasii badiyo balse waxaan ii samaxayn xasuusta sida aadka ah iigu soo maaxanaysa ee Hooyo macaan oo maanta qabriga iyo xabaasha ku jirta.
Hooyo Ilahay qabriga ha u nooro
Hooyo Ilahay Janadii fardawsa ha geeyo
Marka aad nin hiilloo
Laga baqo hashiisiyo
Halyey diran dhashaa baa
Hooyo lagu xasuustaa
Marka aad nin hoo-loo
Isku soo halleeyoo
Hor Illaahay geystiyo
Lama hure dhashaa baa
Hooyo lagu xasuustaa.
Mar aad nin himilada
Hilin toosan mariyoo
Hir markii la gaadhoba
Ku labaad hilaadshoo
La higsado dhashaa baa
Marka aad nin hoogiyo
Ka hor taga daalkoo
Garta hubin yaqaanoo
Xaqa hoos u eegoo
Dabka hura bakhtiiyoo
Ku haggoogta dhiiggoo
Dadka kala hagaajoo
Kala haga dhashaa baa
Markaad hoobal caaniyo
Hab-dhaca iyo luuqdiyo
Rabbi biyo u siiyoo
Hal-abuur dhashaa baa
Dumar iyo haween baa
Nolol lagu haweyntaa
Kuwa lagu hammiyayee
Sida hawd caleen weyn
Rag u wada hammuumee
Marka guur la haybshee
Gabadh heego dheeroo
Hoobaan la moodoo
Karti iyo hubqaadloo
Quruxdana ka hodaniyo
Hira laga aroostaa
Nabad lagu hubaayooo
Hurdo lagu gam’aayoo
Dugsi laga helaayoo
Waxa lagu hal-maalaa
Hayin lagu badhaadhaay
Hogol lagu qaboobaay
Gogol lama huraaneey
Hidda lagu arooraay.
Intaad hooyo nooshahay
Hambalyiyo salaan baan
Hanti kaaga dhigayaa
Hamrashiyo xaq dhowr baan
Dusha kaa huwinayaa
Hiyiga iyo laabtaan
Hengel baan u xidhayaa
Inta haadka duushiyo
Idil habar dugaaggee
Ifka hibo ku noolow
Aakhiro halkii roon
Amiiiiiiiiiin amiiiiiiiiiiiiin amiiiiiiiiiiiiiiiin